Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo ka hadlay Shirkii Garoowe iyo waxa sababay in ay ka qeybgaliwayeen – Walaal24 Newss
April 9, 2019	0	By walaal24
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa ka hadlay sababta uu uga baaqday shirka uga socda magaalada Garowe guddoonka Baarlamaanka dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ka furmay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal.
Guddoomiye Casir ayaa sheegay in shirkaasi markii hore uu Guddoonka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uu ku casuumay, balse ay heleen warqad ka timid Puntland oo looga reebayo shirka.
Wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweyne Xaaf iyo Madaxa Xukuumada Shaakir ay warqad u direen madaxda Puntland kana hadleysay in uusan matalin kana qeygalikarin shirka Garowe Gudomiyaha Barlamaanka Galmudug Cali Gacal, taasoo sababtay khilaafka u dhaxeeya maamulka Galmudug oo mudo soo jiitamaayay.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ayaa xusay in xilligan ay Puntland soo faageyso boogo la daweeyay oo u dhexeeyay hoggaanka maamullada, waxa uu ugu baaqay maamulka cusub ee Garowe in ay ka waan toobaan tallaabooyinka nuucaas ah.
Dhinaca kale Gudoomiyaha Cali Gacal ayaa sheegay in aysan aqoonsan doonin qodobada ka soo baxa shirkaasi, maadaama aan loo dhameyn.
Shir u dhexeeyay guddoonka BFS iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa shalay ka furmay magaalada Garowe ee xarunta Puntland, waxaana shirkaasi looga arrinsanayaa wada shaqeynta Baarlamaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee dalka.
Wasiirka Maaliyadda XFS oo hambalyo u diray Madaxweynaha cusub ee Bangiga Aduunka
Ciidamada xoogga Dalka oo howlgallo laga xoreynaayo Al shabaab ka sameeyey Gobolka Gedo